फेरि बढ्न थाल्याे काेराेना संक्रमण,नियन्त्रणका लागी चालिदैछन् यस्ता कदमहरु।फेरी हुनेभयो लकडाउन? |
November 21, 2021 November 21, 2021 adminLeaveaComment on फेरि बढ्न थाल्याे काेराेना संक्रमण,नियन्त्रणका लागी चालिदैछन् यस्ता कदमहरु।फेरी हुनेभयो लकडाउन?
युरोपभर फेरि बढ्न थाल्याे काे-राेना संक्रमण, नियन्त्रणका लागी चालिदैछन् यस्ता कदमहरु ! वर्लिन-युरोपेली देशहरूमा फेरि को- भिड संक्रमणमा तीब्र बृद्धि भएको छ । बेलायत, इटाली, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, अस्ट्रियालगायतका युरोपेली देशहरुमा को- भिड संक्रमण फेरि बढेको हो ।को- भिड बढेसँगै ती देशहरुमा पुनः लकडाउनदेखि नियन्त्रणका अन्य प्रतिबन्धात्मक कदमहरु चालिएका छन् । पछिल्लो साता जर्मनीमा को- भिड संक्रमण तीब्र बढेको छ । जर्मनीमा बिहीवार ६५ हजार नयाँ संक्रमित भेटिएका थिए । यो संक्रमण दर महामारी सुरु भएयताकै सबैभन्दा ठूलो हो ।
पछिल्लो संक्रमणलाई त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्री वाई स्पानले ‘राष्ट्रिय आपतकाल’ भनेका छन् । को- भिड संक्रमण बढेपछि अस्ट्रियाले अन्तिम अस्त्रस्वरुप देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको छ । यो लकडाउन तीन सातासम्म रहने सरकारले जनाएको छ ।अस्ट्रियाका स्वास्थ्यमन्त्रीले लकडाउनलाई अन्तिम अस्त्र भनेका छन् । त्यस्तै, सरकारले सन् २०२२ देखि को- भिड खोपलाई अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याएको छ । अस्ट्रियाको ठूलो जनसंख्याले अझै खोप नलगाएकोले सरकारले कानुनी व्यवस्था ल्याएको हो ।
अस्ट्रियामा अहिले औषतमा दैनिक १ हजार संक्रमित भेटिएका छन् । त्यस्तै, बेलायत र नेदरल्याड्समा पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्ने नयाँ कदम चालिएका छन् । खोप नलगाउनेलाई भिड हुने क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएपछि शनिबार नेदरल्यान्ड्समा खोपविरोधी प्रदर्शन भएका थिए । प्रदर्शनमा गोली चलाउँदा तीन जना घा- इते भएका छन् ।
Breaking:हुरीजस्तै दोश्रो लहरको रुपमा भित्रियो कोरोना,ठाउ ठाउमा लकडाउन र निषेधाज्ञा घोषणा।भर्खर आयो यस्तो दुखद खबर,पुरा हेर्नुहोस